जनक तिमिल्सिना, असार ११, २०७६
त्रिशलाको स्वभाव सामान्य छ । हल्काफुल्का पहिरनमा रमाउने त्रिशला फुर्सदमा गीत सुन्न रुचाउँछिन् । त्यसबाहेक बाँकी समय आफैं लिरिक्स लेख्छिन् । सबै किसिमका गीत उनको रोजाइमा पर्छन् । उनी लता मंगेसकरका पुराना हिन्दी गीत मन पराउँछिन् । अंग्रेजी गीत पनि सुन्छिन् । रक, पप सबै प्रकारका गीत सुन्ने त्रिशलालाई सबैभन्दा मन पर्ने गीत भने सेन्टिमेन्टल नै हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
गायक हेमन्त रानाको ‘माया बस्यो है’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘साईली’को सफलताको लामो समय पछि गायक रानाले आफ्नै शब्द संगीतमा ‘माया बस्यो है’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक गीतमा विशाल पौडेलको संगीत संयोजन रहेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
चढ्दो वैंशमा रहेका आदित्य शिव सेनाको युवा वाहिनी मोर्चाका अध्यक्ष पनि हुन् । बलिउड नायिका दिशा पटानीसँग उनको हिमचिम कहिलेदेखिको हो भन्ने विषयमा कुनै ठोस जानकारी नआए पनि यतिबेला भने टाइगर श्राफ निकै ट्रोल भैरहेका छन्, र ती ट्रोलमा भनिएको छ– टाइगर जिन्दा है । पुरा पढ्नुहोस्
अनोज रोक्का, असार ११, २०७६
थोरै नेपाली चलचित्रले मात्रै हङकङमा दर्शक पाउँछन् । नेपाली चलचित्रको खस्कदो गुणस्तर र नेपालमा गरिने चलचित्रको रिभ्यूका कारणले पनि हङकङमा प्रदर्शनका लागि थुप्रै चलचित्र पुगे पनि दर्शक हलसम्म जाँदैनन् । तर, चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ ले हङकङेली दर्शकको राम्रो साथ पाएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
रामजी ज्ञवाली, असार ११, २०७६
सामान्य परिवारको एउटा छोरा दयाहाङले नेपाली चलचित्र क्षेत्र हाँक्न सक्ने कहिल्यै कल्पना गरेका थिए ? थिएनन् । नेपाली चलचित्रमा चलेका हिरोहरुलाई नै कामबिहिन गराएर आफु व्यस्त हुने सपना बुनेका थिए ? थिएनन् । दयाहाङ भन्छन्, ‘खुसी खोज्दै जाँदा हरेक मानिस एउटा स्थानमा पुग्छ । म पनि खुसी खोज्दै हिड्दा यो स्थानसम्म आइपुगेको हुँ ।’ पुरा पढ्नुहोस्